Raha tsy tanteraka ny fepetra telo: hanao fitokonana voarindra ny mpiasan’ny fahasalamana | NewsMada
Raha tsy tanteraka ny fepetra telo: hanao fitokonana voarindra ny mpiasan’ny fahasalamana
Nihaona, nandritra ny adiny telo ny faran’ny herinandro teo teny Ambohidahy, ny minisitry ny Fahasalamana, ny sekretera jeneraly ary ny talen’ny kabinetra sy ny solontenan’ny mpiasan’ny fahasalamana, nahitana ny Pr Solofo, ny solontenan’ny SMEDFM, ny filohan’ny Synpa, ny filohan’ny SNOSFM, filohan’ny SISFM, ny solontenan’ireo « interne » nidinika momba ny fepetra fototra hoenti-miatrika ny valanaretina Covid-19. Tsy niova ny fangatahana, fiofanana ho an’ny mpiasan’ny fahasalamana rehetra, fampitaovana ampy sy tonga ara-potoana ary fandrisika sahaza (indemnité de risque, indemnité de réquisition…) sy ara-drariny. Nifanaraka ny roa tonta fa voaray ny olana ary hiezaka hamaly izany ny minisitera tomponandraikitra. Nanome fe-potoana herinandro ny sendikà samihafa misahana ny fahasalamana handrefesana ny asa. Maika ny fizarana ny fitaovam-piarovana ho an’ny mpiasan’ny fahasalamana tsy ankanavaka ary miasa andro sy alina. Azo arindra ny fotoana sy ny toerana amin’ny fiofanana ary misy ny tokony homena izao amin’ny fandrisika, saingy koa tokony hametraka didim-panjakana manokana momba ny « indemnité » hafa tsy azo hefaina dieny izao ny fitondrana. « Toky an-tsoratra izay ary antoka fa ho azo ny vola rehefa voasoratra anaty didy », hoy ny filohan’ny sendikàn’ny « paramédicaux » eto Madagasikara, Ralibera Jerisoa, omaly. « Ampy ny fitaovana, hoy ny minisitra, ka miandry ny fizarana ireny ho an’ny mpiasa izahay », araka ny nambarany ihany.
Sahirana ny mpiasan’ny fahasalamana am-perinasa amin’izao fotoana izao fa ankoatra ireo marary nifindran’ny tsimokaretina, tsy maharaka ny asa ireo salama afaka miatrika. Vonona ny hanome tanana ny sendikà fa miandry fotsiny ny antso.
Hanara-maso ny fampiharana ny fifanekena ny fianakaviamben’ny fahasalamana mandritra ity herinandro ity. Raha tsy feno izay fepetra fototra izay, hanomboka ny fitokonana voarindra ny herinandron’ny 13 jolay ho avy iny.
Nilaza ny minisiteran’ny Fahasalamana fa misy EPI 60 000 hozaraina amin’ny CHRR rehetra eto Antananarivo.